जेठ १९ को त्यो आधा घण्टा जसले सर्वनाश गर्‍यो (सन्दर्भ दरबार हत्याकाण्ड)
1st June 2020, 02:19 pm | १९ जेठ २०७७
दीपेन्द्रले बोहरालाई भने – 'अब ड्रिङ्क्स झिकाऊ।'
बोहराले अर्दली बोलाए। अनि आदेश दिए – 'एक पेग फेमस ग्राउस हिवस्की।'
शुक्रबारको जमघटका लागि पाहुना आउन थालेपछि हिवस्कीमा रमाएका दीपेन्द्र आफैँ सर्भसमेत गर्न थालेका थिए। जमघटका लागि पुगेका पारसलाई दीपेन्द्रले भने – 'के लिने? म हिवस्की खाएर बसेको छु।' 'कोक' अर्डर गर्दै पारसले दीपेन्द्रलाई विवाहको प्रश्न सोधे।
जवाफमा दीपेन्द्रले भने – 'विवाहको कुरा भैराखेको छ। मैले मुमासँग पनि कुरा गरेँ। आफूमुमा (मुमा वडामहारानी रत्न)सँग पनि कुरा गरेँ। अनि दुवै जनाले हुन्न भन्नुभयो।'
तर हिवस्कीमा मात्र मन नरमाएपछि उनले कालो पदार्थ मिसाएको चुरोट मागे। एडिसी बोहोरालाई फोन गरेर दीपेन्द्रले चुरोट मगाएपछि बोहोराले अर्दली रामकृष्णमार्फत् 'कालो पदार्थ' मिसाइएको चुरोट भित्र दिन लगाए।
ढलेका दीपेन्द्रलाई पारस, निराजन, राजीव र गोरखले झ्याइँकुटी पार्दै उनको कोठामा पुर्या्एर सुताए। कोठामा पुगेपछि दीपेन्द्रले बाथरुममा गएर उल्टी गरे। फर्किएर आएपछि आफ्नि प्रेमिका देवयानीसँग फोनमा कुरा गरे।
त्रिभुवन सदनको माथिल्लो तलामा रहेको कोठाबाट दीपेन्द्र निस्किए। शाही अर्दली रामकृष्ण केसीले दीपेन्द्रलाई सोधे - 'सरकार इमर्जेन्सी ब्याग टक्रयाउँ?' जवाफमा दीपेन्द्रले भने - 'पर्दैन।' माथिल्लो तलाबाट तल झरेपछि दीपेन्द्र सिधै त्रिभुवन सदनको बिलियार्ड हलमा पुगे।
वीरेन्द्रलाई गोली हानेपछि दीपेन्द्र बिलियार्ड हलबाट बाहिरिएका थिए। राजिव वीरेन्द्रको बगिरहेको रगत कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका थिए। यत्तिकैमा फेरि दीपेन्द्र हलमा प्रवेश गरे।
दरवार हत्याकाण्डको छानविन गर्न बनेको समितिसँगको बयानमा वीरेन्द्रकी बहिनी शोभा शाहीले भनेकी छन्, 'वीरेन्द्र दाई वाज स्ट्याण्डिङ, हि ट्राइ टु गेटअप, एण्ड हि वाज होल्डिङ अ....(गन), यो छाडिबक्स्योस भनेर मैले ट्याप्प थुतें, हातमा म्यागजिन आयो मैले फालिदिएँ।'
दीपेन्द्रले कुमार खड्गविक्रममाथि समेत फाइरिङ गरिसकेका थिए। राजकुमारी श्रुति वीरेन्द्र नजिक पुगेर बुबा बुबा भन्दै थिइन्, उनले अर्को तर्फ लडिरहेका आफ्ना श्रीमान् गोरखलाई देखिन। ए बाबा, तिमीलाई पनि लाग्यो भनेर उनी श्रीमान गोरखको छेउमा पुगेकी थिइन्। दीपेन्द्रले श्रुतिलाई पनि त्यहीँ गोली हाने। श्रुति श्रीमान गोरख माथि लडिन्।
कहाँ थिइन् रानी ऐश्वर्य र निराजन?
बिलियार्ड हलमा छिरेर वीरेन्द्रलाई पहिलोपटक गोली हानेपछि दीपेन्द्र दुई पटक हल भित्र र बाहिर गरिसकेका थिए। दीपेन्द्र अब तेस्रो पटक हल भित्र छिरे। उनले हलमा कुना-कुनामा गएर हेर्दै थिए। बिलियार्ड हलको एक कुनामा अग्लो कुर्सीको मुनि पारस लुकिरहेका थिए।
समितिसँगको बयानमा पारस भन्छन्, त्यसपछि (दीपेन्द्रको) डाइरेक्ट नजरमा हामी पर्यौं। के गरिबक्स्या हजुर...हामी ...के गरिबक्स्या प्लिज गई बक्स्योस भनेर त्यो बिन्ती जाहेर गरें मैले। मैले चाहि दाइसँग के गरिबक्स्या हामी यस्तो यहाँ त हामी मात्र छौं, प्लिज... वान बाई वान सबैलाई हेरेर छाडेर बाहिर लागिबक्स्यो। त्यसपछि थाहा भयो हामीलाई हानी बक्सेन भनेर।
समितिलाई दिएको जवाफमा केतकी चेस्टर भन्छिन्, जुन बेलामा बडामहारानी (ऐश्वर्य) सरकार लम्केर बगैंचामा सवारी भयो, त्यसकै एक सेकेन्डमा निराजन चाहीं दौडी दौडी उहाँको पछि लागेको मैले देखेको थिएँ। मैले त्यो बेलामा बाहिर सवारी भएको देखें। लमक लमक बगैंचातिर दुईचोटी मैले भाउजु भाउजु हुन्न भाउजु भनिकन बिन्ति गरें। तर उहाँको मुहारबाट थाहा पा थें कि म बन्दुकै लिन्छु कि म (ऐश्वर्य) मर्छु भन्ने मेरो मनमा लागेको त्यति हो। निराजन चाहीं उहाँको पछिपछि सुरक्षा गर्न गएको भन्ने मलाई लाग्यो।
दीपेन्द्र पल्टिएकै ठाउँमा गल्क गेज पिस्तोल र खोका थियो। त्यसैले उनी आफैले आफैलाई गोली हानेको अनुमान गरिएको छ। समितिसँगको बयानमा सेनानी गजेन्द्र बोहोरा भन्छन्, त्यति वेला मेरो एम क्राउन प्रिन्सलाई नियन्त्रणमा लिने नै थियो। किनकी मैले अटोमेटिक वेपन देखेको थिएँ। त्यसैले नियन्त्रणमा लिन स्ट्याण्डबाई रहेको सेक्युरिटी फोर्सको मद्दत लिनुपर्ने भएकोले म बाहिर निस्कें। तर जब म डोर नजिक पुगेको थिएँ, त्यसबेला पुन: गोली चल्यो, त्यही बेला हुनुपर्छ क्राउन प्रिन्सले आफैलाई गोली हानिबक्सेको।
दरवार हत्याकाण्डमा गोली लागेका सबैलाई छाउनीस्थित नेपाली सेनाको अस्पतालमा लगिएको थियो। जहाँ पुर्यााउना साथ वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र निराजनलाई राति ९ बजेर १५ मिनेटमा मृत घोषणा गरियो।
अस्पताल पुर्‍याउँदा नै दीपेन्द्र नेचुरल्ली डेड भए पनि क्लिनिकल्ली लाइफ सपोर्ट दिएर बचाइएको थियो। यही तीन दिन उनी देशको महाराजसमेत बने। दरबारमा भएको के थियो, कसैलाई केही यकिन थाहा थिएन। नायबी सम्हालेका ज्ञानेन्द्रले 'दरबारमा स्वचालित हतियार पड्किन गई' घटना भएको भनेर विज्ञप्ति निकाले।
(जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ। त्यही सन्दर्भमा यो सामग्री पुन: प्रकाशन गरिएको हो।)